Ukushaja okusheshayo kwe-Apple Watch Series 7 ngamashaja ahambisana nephrothokholi ye-USB Power Delivery noma eyakwa-Apple | Izindaba ze-IPhone
UJordi Gimenez | 15/10/2021 18:00 | I-Apple Watch
Enye yezinto ezintsha ezifakiwe ku-Apple Watch Series 7 ukuthi baqale ukuthengisa namuhla kuyashaja ngokushesha. Lokhu kukhokhisa kudinga ukuthi kwenziwe okungenani okuncane futhi inkinga ibikukhebuli yokushaja ebikade isebenzisa i-USB A, manje eyi-USB C, naseshaja uqobo.
Kungakho inkampani ichaza izidingo ezidingekayo zokwenza lo mthwalo ngejubane eliphakeme. Ngale ndlela, labo basebenzisi abanamashaja asemthethweni we-Apple anokuxhumeka kwe-USB C bangenza njalo nganoma iyiphi imodeli. Labo abangenawo la amashaja asemthethweni e-Apple bazoncika kuphrothokholi ye-USB Power Delivery kusuka kumamodeli we-5W.
Labo abavela ku-Apple kumele okungenani babe namandla we-18W ukuze bakwazi ukunikela ngale mali esheshayo kumawashi amasha, lezo ezingekho emthethweni ezivela ku-Apple kuzodingeka zibe ne-USB Power Delivery (USB-PD) protocol ukukwazi ukunikela ngale mali enikeza ukukhokhiswa okungu-80% webhethri eliphelele ngemizuzu engama-45 kuphela. Okubalulekile lapha ukuthi sisebenzise ikhebula lethu elingezwe esimweni sokubuka nenye yalamashaja.
Nakulokhu kufanele sikusho lokho lawa mashaja awafakiwe ebhokisini wewashi elisha kepha kungenzeka ukuwathenga ezitolo zakwa-Apple. Lesi senzo sikuthola kuyishwa impela yize sijabule ngokuthi ekugcineni bangeze i-USB C ekuxhumekeni kwentambo. U-Apple uphinde achaze ukuthi ukushaja ngokushesha i-Apple Watch Series 7 akutholakali e-Argentina, India noma eVietnam, kepha akunikezi incazelo ngalo mkhawulo kula mazwe amathathu.
Ngakolunye uhlangothi, iseluleko lapha ukusebenzisa amashaja "alungile" ukushaja amadivayisi wethu. Khumbula ukuthi kunamashaja wekhwalithi emakethe ngamanani entengo, awudingi ukuthenga ku-Apple uma ungafuni, kodwa Sicela usebenzise ishaja nentambo yokushaja enezitifiketi zokuphepha ukugwema izinkinga.
Indlela ephelele ye-athikili: Izindaba ze-IPhone » Imikhiqizo ye-Apple » I-Apple Watch » Ukushaja ngokushesha i-Apple Watch Series 7 ngamashaja ahambisana nephrothokholi ye-USB Power Delivery noma eye-Apple
I-WhatsApp isebenzisa izipele ezifihliwe zokugcina